I-Semalt Expert ichaza indlela yokukhusela izikhangiso ezingafunekiyo Kuzo zonke iiNkqubo
Ukwandiswa kwe-Ad-blocking efana ne-Adblock Plus yaziwa kakhulu kwi-webmasters kunye neeblogi, nokuba zisetyenziselwa ukubulala iintengiso eziphazamisayo neziphazamisayo okanye ukunciphisa isantya sefowuni yakho. Enye yobuthakathaka obuninzi kukuba izandiso zisebenza kunye neziphequluli kuphela xa ungazihlaziyiziinyanga okanye ungazifaki kwiindawo ezisemthethweni. Ukuba ufuna ukuvimba ukuthengiswa kwiindawo ezithile kwihlabathi jikelele, unokukwazi ukuhlela iifayile zefomati zekhompyutheni kunye nokuyeka isiphequluli, i-iPhone yakho okanye esinye isicelo ukuvula iintengiso zelo nkampani ethile.
U-Igor Gamanenko, umqeqeshi okhokelayo ukusuka kwi-10 (Semalt , uchaza apha ukuba yonke inkqubo isebenza njani - fotografiar sol.
I-DNS ithathwa njengencwadi yenombolo kwi-intanethi. Ikhomputha yakho okanye i-laptop isebenzisa iindlela ezimbini ezahlukileyo ukufumana iseva phezu kwenethiwekhi. Ekuqaleni, iifayile ezisetyenziswayo zazisetyenziswa kodwa ngoku iifayile zaba nzima ngakumbi ngenxa yeYunivesithi kunye ne-DARPA. Kamva, i-DNA yaqaliswa ngenjongo yokuguqula i-lookup kwiinkonzo kubo bonke abasebenzisi. Le mihla, phantse zonke iinkqubo zokusebenza zenza i-IP-lo-up ngokubheka iifayile zomphathi. Ukuba ifayile ayifumanekanga, ithumela imibuzo ye-DNA.
Ngexesha, i-DNA ibe yinkxalabo enkulu yokhuseleko kwi-intanethi. Naluphina uhlobo lomshini onokukwazi ukuguqula igama-to-IP lookup liza kukhohlisa inkqubo yakho ye-DNS ekukholweni kwiinkonzo ezikude kunye ne-SSL ngaphandle kokukuxelela into. Ukhuseleko lweSitifiketi se-SSL luqinisekisa ukuba ivenkile yakho yokuthenga i-intanethi kwi-DNA ikhuselekile kwaye ikhuselekile. Ukuba utshintshela ummiselo-mncedisi kumatshini wendawo, unokukwazi ukwenza imisebenzi eyahlukileyo kwidivaysi yakho, ngaphandle kwengxaki. Ngaba yile nto ufuna ngokwenene? Ezinye iintlawulo zale nkqubo zixutywe ngezantsi.
1. Inokukhawulezisa i-intanethi kuba i-default ihlola ifayile yehostown yasekhaya ngaphambi kokusebenzisa i-DNA..
2. Ku luncedo kuzo zonke iintlobo zeipheqululwazi kwaye zingasebenza kwiintlobo ezahlukeneyo zesoftware ezifana ne-RealPlayer, iTunes, i-Twitter nabanye.
3. Iyakwazi ukusebenza kumanqanaba okulungiswa kwegama le-OS kwaye ayinanto enxulumene neTCP kunye ne-UDP.
4. Kuxhomekeka kwiqonga, MS Windows, OSX, kunye neLuxu. Ukuba inkqubo isebenzise i-IP (intanethi yeprotocol), ngokuqinisekileyo iya kuba nefayile yommandla kwindawo ethile.
5. Inokumisa ukulandelwa kwee-ad, kunye nefayili yempumelelo ngumthombo obalaseleyo. Ukuba awufuni ukulandelwa, ungadinga ukusebenzisa ii-cookies zokuphuma.
6. Ingakwazi ukukhusela lula i-malware kunye ne-spyware. Ukuba indawo yomncedisi ifakwe kwifayili, iya kwandisa ukhuseleko lwekhompyutheni yakho kwaye iza kuqinisekisa amava amanethiwekhi athile kakhulu.
Vimba iFayile yamaHlathi kunye neeFayile eziDalwe nguLuntu:
Okokuqala, kufuneka ufumane ifayile yefesti ekhoyo kwikhompyutha yakho. Umsebenzi olandelayo kukuvimba le fayili kunye neefayile ezenziwe ngabantu. Ukuba awunayo ifayile yomncedisi, ngoko unokuqhubeka ngaphandle kokuguqula. Kodwa ukuba unayo ifayile yefayile, kufuneka wenze ezinye iikopi zokugcina ukuqiniseka ukuba idatha yakho ayilahlekanga. Akukho mfuneko yokwakha iifayile ezikwindwendwe, ukongeza ii-server ezininzi ze-ad njengoko ikhompyutha yakho iya kusebenza ngokufanelekileyo.
Xa uvimbele nayiphi na iwebhusayithi ukuba ungene kwifayile yakho yempi, kufana nebhokliya yenyukliya. Kodwa akukho nto inokukhathazeka ngayo njengoko unokuyibhalela kwi-PC yakho kwaye uyimise ukuba ingalayithwanga.